Kiiska Badda Ee Soomaaliya iyo Kenya oo Ay ICJ War Cusub Ka soo Sartey
Maxkamadda ICJ ayaa waxaa ay soo saartay war cusub oo la xiriira habka dhegeysiga kiiska Badda ee ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya.
Waxyaabaha Maxkamadda ka cusub. Waxaa ka mid ah in dhamaan dadkii isu diiwaangeliyay ka qeybgalka. Kiiska dhegeysigiisa la faray in ay dib isu diiwaangeliyaan waliba dhinaca Shabakadda Internetka.
Maxkamadda waxaa ay sheegtay. In Diblomaasiyiinta. Warbaahinta iyo ka qeybgalayasha kale ee isdiiwaangeliyo loo fiirinayo. Sida ay u kala horreeyeen. Sidaasna loogu adeegayo oo aysan jirin diiwaangelin horudhac ah ama boos ceshi ah.
Waxaa kale oo ay maxkamadda sheegtay. In dhammaan dadka daneynaya ka qeybgalka dhegeysiga kiiska. Ay heystaan ilaa 24ka Bisha October wixii ka dambeeyanaya aan codsigooda la tix gelin doonin.
Maxkamadda waxaa ay dhegeysiga billaabi doontaa. Maalinta 1aad oo ah Isniin ah 4ta November. Waxaana maalintaas iska leh Soomaaliya oo hadli doonta 10:00 AM ilaa 1:00PM iyo 3:00PM ilaa 4:30PM Galabnimo.
Sidoo kale Kenya ayaa hadli doonta. Maalinta Arbacada ,waxaana ay Kenya hadli doontaa 10:00AM ilaa 1:00PM iyo 3:00PM ilaa 4:30PM Galabnimo.
Maalinta 2aad ee Soomaaliya ay hadli doonto. Waa maalinta 3aad ee dhegeysiga ayaa ku beegan Khamiis 7da Bisha November, waxaana uu dhegeysiga Soomaaliya soconayaa 3:00PM ilaa 4:00PM galabnimo.
Maalinta 2aad ee Kenya ahna maalinta ugu dambeysa dhegeysiga kiiska ee 4aad waa Jimco 8dda November waxaana ay Kenya hadleysaa 3:00PM ilaa 4:00PM galabnimo.
Dhegeysiga Kiiskan oo lagu waday in uu billowdo sagaalkii bishan ayaa dib loo dhigay kaddib markii saddexdii Bishan Kenya dalbatay in muddo 12 bilood ah dib loogu dhigo si ay u qaadato Qareenno cusub, hayeeshee ICJ ayaa muddada dib u dhigidda ku soo koobtay laba bilood markii ay Soomaaliya diidday codsiga Kenya.